आइसोलेसन कक्ष व्यवस्थापनमा काभ्रेका स्थानीय तह सक्रिय - Meronews
आइसोलेसन कक्ष व्यवस्थापनमा काभ्रेका स्थानीय तह सक्रिय
मेरोन्यूज २०७८ वैशाख २५ गते ७:५३
वनेपा । काभ्रेका स्थानीय तहहरु आइसोलेसन कक्ष व्यवस्थापन गर्न सक्रिय भएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को दोस्रो लहर फैलिएपछि काभ्रेपलाञ्चोकका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्न सक्रिय भएका हुन् ।
नमोबुद्ध नगरपालिका र रोशी गाउँपालिकाले संयुक्तरुपमा नमोबुद्धको नौविसेमा जनक बहुमुखी क्याम्पसमा ४० शैय्याको आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरेको छ ।
सीमित जनशक्ति एकीकृत रुपमा परिचालन गरी आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीको सेवा प्रभावकारी बनाउन दुई पालिकाबीच सहमती गरिएको नमोबुद्ध नगरपालिकाले जनाएको छ ।
आइसोलेसनका सबै शय्यामा अक्सिजनसहितको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिएको छ । दुबै पालिकाबाट एक/एक चिकित्सक आलोपालो हुनेगरी खटिनेछन् भने बिरामीको अनुपातमा दुबै पालिकाबाट स्वास्थ्यकर्मी खटाइने छ । सो केन्द्रमा एक जनाको उपचार भइरहेको छ । यसअघि सो केन्द्रमा २५ शैय्या मात्र व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
कोशीपारिस्थित चौंरीदेउराली गाउँपालिकाले पनि सङ्क्रमितको उपचारको लागि तीन ठाउँमा गरी १८ शैय्याको अक्सिजन सिलिण्डरसहितको आइसोलेसन केन्द्र व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष दिननाथ गौतमका अनुसार वडा नं. ५ को धुसेनी शिवालय प्राथमिक अस्पतालमा १०, वडा नं. २ को डिसीडब्लुसी अस्पतालमा ५ र वडा न. ३ को धुलिखेल अस्पतालको आउटरिच केन्द्रमा ३ शैय्याको आइसोलेसन कक्ष व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
शैय्या व्यवस्थापनसँगै धुसेनी शिवालय प्राथमिक अस्पतालमा दुई र अरू अस्पतालमा एक÷एक गरी ४ जना एमबिबिएस डाक्टरलाई तयारी अवस्थामा राख्ने योजना रहेको उनले बताए । गाउँपालिकाले आवश्यक औषधि र अक्सिजन सिलिण्डर खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै वनेपा नगरपालिकाको सक्रियतामा बनेपास्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा २० शैय्याको आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था गरिएको छ भने नगरपालिकाको वडा नं. ५ स्थित नेपाल वनेपा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटमा ५० शैय्याको आइसोलेसन व्यवस्थापन गरिएको छ ।
पाँचखाल नगरपालिकाले पनि तामाघाट समाजकल्याण चोकमा स्वास्थ्य उपकरणसहित चिकित्सक तथा आवश्यक दक्ष स्वाथ्यकर्मीसहित १५ शैय्याको आइसोलेसन कक्ष तयार गरिसकेको छ । अहिले पाँचखाल बाहेक वनेपा र नौविसेको आइसोलेसन केन्द्रमा कालीजंग गण धुलिखेलको नेपाली सेनाको टोलीले सुरक्षा दिँदै आएको छ ।
शुक्रवारसम्ममा जिल्लामा ७० सङ्क्रमित थपिएसँगै सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९६४ पुगेको छ ।
वनेपामा ३७२, पनौतीमा २१५, धुलिखेलमा १८९, पाचखालमा ६६, मण्डनदेउपुरमा २७ र नमोबुद्ध नगरपालिकामा ३२ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् ।
त्यस्तै रोशीमा २१, चौरीदेउरालीमा ८, तेमालमा ७, बेथानचोकमा १४, भुम्लुमा ८, महाभारतमा ३ र खानीखोला गाउँपालिकामा २ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ । १६ जना भने शुक्रबार निको भएर घर फर्किसकेको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ । (रासस)
कांग्रेस नेता बानियाँले भने -‘अहिले राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ’